Ọrụ Ndị Ọkachamara Anyị Na-enye | Popular Jewelry
N'ebe a na-ewu ewu, anyị abụghị naanị ere ọla. Anyị na-enyere ndị ahịa anyị aka ịhọrọ ọmarịcha ọla dị mma nke dabara n'ụdị na mmefu ego ha. Ma ị na-akwụghachi onwe gị ụgwọ, ịzụrụ onyinye maka onye ahụ pụrụ iche, ma ọ bụ na-eme mmemme / emume pụrụ iche, ị ga-enwe afọ ojuju na nzụta gị.
Na-achọ ihe pụrụ iche; nke onwe? Ndị omenkà anyị nwere ike inyere gị aka ịmebe ọla nke aka gị; -eme ka gị na nrọ iberibe tangible. Omenala eji eme nma ndi mara nma bu ndi kacha baa uru- ha bu ngosipụta nke okwu gi. A na-etinye ụfọdụ ọmụmaatụ nke mpempe akwụkwọ emere n'okpuru:
Ntọala Mgbanaka Omenala maka ụbọchị ọ bụla, njikọ aka ma ọ bụ agbamakwụkwọ
Ezé Ezé (Mkpụrụ)
aha Plates, Aha Mgbaaka, Ntutu aha, Aha ọla aka, wdg.
Peeces emere n'usoro ma ọ bụ Pendants na Necklaces
Na ihe ọ bụla ọzọ ị ga - eche Mụtakwuo
Mmezi / Mweghachi
Anyị nwere ike ịrụkwa, resize, ma weghachi ọla gị dị ka ọ dị na mbụ. Anyị nwekwara ike ịkwalite na ịkwa mma nke ọla gị dị ka o si masị gị. Ihe atụ nke ọrụ anyị nyere gụnyere (mana ọnweghị oke na) ihe ndị a:
Electroplating / nri (Rhodium, ọla ọcha, na ọla edo)
Mmezi General Jewelry
Mgba agha / ịgbado ọkụ
Lelee nnọchi batrị
Ntughari & Scrap
Nwere ụfọdụ ọla ịchọ mma a na-achọghị dina n’ụlọ na-achịkọta uzuzu? Anyị na-enye quotes maka diamond, gold, na platinum. Maka ọla edo gị, ịnwere ike ịnata ego ma ọ bụ kredit ụlọ ahịa, nke ị nwere ike iwepụta maka nzụta ọhụrụ.
Kpọtụrụ Anyị- anyi ji obi uto zaa ha na
dozie nsogbu ọ bụla ị nwere ike gbasara anyị
ngwaahịa na ọrụ.
7 ụbọchị izu, 365 ụbọchị na afọ
New York City anaghị ehi ụra, yabụ na anyị enweghị =)